Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Hillary Clinton oo Magacawday Ku Xigeenkeeda Doorashada Maraykanka.
Daawo: Hillary Clinton oo Magacawday Ku Xigeenkeeda Doorashada Maraykanka.
Murashaxada xilka Madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka Hillary Clinton ayaa ku dhawaaqday qofka ay u xulatay inuu u noqdo Madaxweyne kuxigeen hadii ay xilka ku guuleysato doorashada madaxtinimada ee soo socota.
Hillary ayaa xulatay Senator Tim Kaine oo horey usoo noqday Duq magaalo iyo waliba guddoomiyaha gobalka Muhiimka ah ee Virginia. Senatorkan ayaa kamid ah xildhibaanada sida weyn ulla shaqeeyey dowlada Madaxweyne Barck Obama. Wuxuuna kamid ahaa guddoomiyayaashii gobalada Maraykanka ee ugu horeeyey oo taageeray waagii u Madaxweynaha isu sharaxay Barack Obama sanadkii 2007. Xiligaasi oo ay Hillary Clinton lafteeda tartanka ku jirtay.
Senator Tim Kaine ayaa sidoo kale lagu xasuustaa kaalintii uu ku lahaa heshiiskii dhexmaray Maraykanka iyo IRAN ee barnaamijka Nukleerka. Ninkan ayaa horey uga mid ahaa dadka faafiya diinta Kirishtaanka ee dalalka Latin America, wuxuuna si fiican ugu hadlaa luuqada Spanish-ka taasi oo ay dooneyso Hillary Clinton inuu gacan uga siiyo soo jiidashada dadka Latin-ka ah iyo waliba loolanka ay lagaleyso Donald Trump.
Mrs.Clinton ayaa magacaabida Madaxweyne kuxigeenkeeda kusoo beegtay labo maalin kahor furitaanka shirweynaha xisbiga Dimuquraadiga oo ka dhici doona magaalada Philadelphia.